Sun, May 31, 2020 at 5:36pm
के तपाईंलाई अचार मन पर्छ ? सावधान ! अचार खानु यसकारण छ हानिकार :
एजेन्सी, २० जेठ चटनी, अर्थात अचार । खानामा तिख्खर स्वाद खोज्नेहरुलाई अचार चाहिन्छ । हामीकहाँ खानामा अचार हुन्छ । गोलभेडा, धनियाँ, नुन-खुर्सानी मिसाएर बनाएको अचारले हरेक गाँसलाई स्वादिलो बनाउँछ । तिख्खर बनाउँछ । ताजा अचार खानु सामान्य हो । यद्यपी अचार भनेपछि त्यसमा पिरो र नुनिलोको मात्रा बढी हुन्छ । यसले स्वतः शरीरमा नुनको मात्रा बढाउँछ । पिरोले पनि धेरैलाई पिरोल्छ ।..
होटलहरुमा पनि निकै लोकप्रिय परिकार 'मटर पनिर' घरमै यसरी स्वादिष्ट बनाउने .....
काठमाडौँ, १६ जेठ मटर पनिर नेपालमा पनि निकै लोकप्रिय परिकार हो। सामान्यतया होटलमा खाइने यो परिकार घरमै पनि बनाउन सकिन्छ। सबै प्रकृया पुर्याएर बनाउनेहो भने आफैले घरमै होटलको जत्तिकै मिठो मटर पनिर बनाउन सकिन्छ। मटर पनि बनाउदा सामान्यतय पनिरलाई क्युब सेपमा काटिन्छ । सर्बप्रथम पनिरलाई तेलमा फ्राई गर्नुहोस। फ्राइ्र्र गर्दा पनिरलाई चलाई रहनुपर्छ जसले गर्दा सबैतिर समान रुपमा पाक्छ। पनिर रातो भएपछि..
के तपाईंलाई अण्डा मन पर्छ ? जानिराखौं यसका फाइदा र बेफाइदाहरु !
एजेन्सी, १४ जेठ अण्डालाई पौष्टिक खाद्य पदार्थ मानिन्छ । धेरैजसो पन्छीको अण्डा खाइने भए पनि संसारभर धेरैले खाने अण्डाचाहिँ कुखुराकै हो । यसबाहेक हाँस, बट्टाई, अष्ट्रिच आदिका अण्डा पनि धेरैले रुचिपूर्वक खाने गरेका छन् । वन्य पन्छीहरू ढुकुर, कालिज तथा तित्राका अण्डा पनि निकै रुचाइन्छ । यसो भनौँ, मानिसहरू पाएजति पन्छीका अण्डा खान बाँकी राख्दैनन् । ती सबैका अण्डामा केही फरक..
स्नेहा ट्राभल मिडियाले नेपाली खानालाई पर्यटनसँग जोड्न प्रतियोगिता
काठमाडौँ, ६ जेठ स्नेहा ट्राभल मिडियाले नेपाली परम्परागत तथा जातीय खानालाई पर्यटनसँग जोड्ने प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ । सो ट्राभल मिडिया नेपालले नेपाली खानालाई पर्यटनसँग जोड्न ‘सगतानी एक्जिम कलेज सेफ आइकन–२०१८’ गर्न लागेको हो । उक्त प्रतियोगितामा १२ कलेजका ३६ विद्यार्थीको सहभागिता रहने छ । जेठ १५ देखि असार ३० गतेसम्म नेपालमै पहिलोपटक हुन लागेको प्रतियोगितामा नेपाली परम्परागत खाना, आदिवासी खाना, कन्टिनेन्टल तथा..
नेपाली रैथाने खानाको विश्वव्यापीकरण अभियानको शुभारम्भ
काठमाडौँ, २४ वैशाख नेपाली रैथाने खानालाई विश्व बजारमा स्थापित गराउने अभियानको सोमबार औपचारिकरुपमा थालनी भएको छ । अभियानअन्तर्गत तयार पारिएको नेपाली खाना पकाउने ज्ञान प्रदान गर्ने कुकु बुक एवं भिडियोको सार्वजनिक गरिएको छ । होटल एसोसिएशन अफ नेपाल(हान) र नेपाल पर्यटन बोर्डको आयोजनामा सोमबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले ती प्रचार सामग्रीको सार्वजनिक गर्दै नेपाल आउने..
गरौं यहिँ केहि! युवाहरुको समूह मिलेर अचार उद्योग सञ्चालन
सोलुखुम्बु, महाकुलुङ , २३ वैशाख चाचालुङका दस युवा मिलेर सामूहिक उद्यम सुरु गरेका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्को सहयोगमा युवाले सामूहिक रूपमा अचार उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्को पाँच लाख बिनाधितो ऋण युवाको लगानीमा अचार उद्योग सञ्चालनमा ल्याएपछि दस युवालाई स्वरोजगारसँगै आयआर्जनको आधार भएको उद्यमी भरत राईले बताए । जिल्लामा उत्दापन भएको उक्त अचारको माग जिल्लाभर रहेको राईले बताए ।..
म:म मन पर्छ ? जानिराखौं स्वादिष्ट मःम बनाउने सजिलो तरिका :
एजेन्सी, बैशाख १७ हामी खाजा खान होटेलमा जान्छौँ । मेनु हेर्छौं, तलदेखि माथिसम्म । र, सबैको आँखा गएर अड्किने परिकार हो, मःम । खाजाका रूपमा आजभोलि सबैले मःम रुचाउँछन् । यदि मःम खान त्यत्तिका धेरै रुचि लाग्छ भने घरमै पनि बनाएर खान सकिन्छ । धेरै गाह्रो हुँदैन । मानौँ, तपाईंले एक किलो चिकेन, मटन, बफ अथवा भेज मःमको किमा बनाउनुभएको छ..
अक्षय तृतीया पर्व ऋतुअनुसार खान सिकाउने : यस कारण खानुहोस रसयुक्त खानेकुरा
काठमाडौँ ५, बैशाख : वैदिक धर्मशास्त्रमा विशेषगरी जाडो, गर्मी र वर्षा गरी तीन ऋतुको व्यवस्था रहेको छ । साथै यीसँगै जोडिएर आउने वसन्त, ग्रीष्म र हेमन्तको चर्चा पनि गरिएको पाइन्छ। यसरी कालगणनाका लागि वर्षमा ६ ऋतुको व्यवस्था गरिएको छ । ऋतुअनुसारको जीवनचर्या अपनाउने र त्यसअनुसारको खानपान गर्ने गरे स्वास्थ्य रक्षा हुने र मानिसले चाहेअनुरूप पुरुषार्थ गर्न सक्ने बताइएको छ । एक..
नयाँ वर्षको अवसर पारेर चितवनमा ‘नारायणगढ फुड फेस्टिबल’
चितवन, ३० चैत नयाँ वर्षको अवसर पारेर चितवनमा पहिलो पटक ‘नारायणगढ फुड फेस्टिबल’ आयोजना गरिएको छ । नारायणगढको क्याम्पाचौरमा बिहीबारदेखि शुरु भएको फुड फेस्टिबल (खाना महोत्सव)आगामी वैशाख ३ गतेसम्म जारी रहने महोत्सव संयोजक ज्ञानेन्द्रमान शाक्यले जानकारी दिए । अंग्रेजी नयाँ वर्ष व्यापक रुपमा मनाइने तर विक्रम संवत्को नयाँ वर्ष मनाउने क्रम हराउँदै गएको सन्दर्भमा नेपाली नयाँ वर्षका अवसरमा खाना महोत्सव आयोजना गरिएको..
नेपाली खानाको विश्वव्यापीकरण गर्न राष्ट्रिय अभियान शुरु, विदेशी पर्यटक आकर्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य
काठमाडौँ, २६ चैत विश्वव्यापीकरणसँगै अधिकांश नेपाली मौलिक खाना लोप हुँदै गएको अवस्थामा त्यसलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउँदै विश्वभर प्रचारप्रसार गराउने उद्देश्यले नेपाली खानाको विश्वव्यापीकरण गर्ने राष्ट्रिय अभियान’ शुरु भएको छ । नेपालका स्थानीय रैथाने खानाको परिकारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी पर्यटक आकर्षण गर्ने उद्देश्यले अभियान शुरु गरिएको हो । होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान)को संयोजनमा रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएशन अफ नेपाल र सेफ्स एशोसिएशन अफ नेपालले..
काठमाडौँ, २१ चैत जाडो याममा चिसो फाल्न खसीको खुट्टाको सुप निकै उपयोगी हुन्छ । खसीको खुट्टाको सुप आ–आफ्नै तरिकाले पकाएर खाने गरिन्छ ।खसीको मासुको थरि थरिका परिकार बनाएर खाएको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ । अधिकांशले यो परिकार मन पनि पराउँछन् । तल पढ्नुहोस विभिन्न प्रकारका खसीको मासुका परिकारहरु : साँधेको कलेजो : पहिले पानी उमाल्ने र त्यसमा सिंगो कलेजो डुबाएर आधा घण्टासम्म छोपेर राख्ने ।..
‘स्ट्याण्ड–अप कमेडी शो’ को आयोजना गर्दै पानोस रेष्टो
काठमाडौं, चैत्र १४ । नयाँ बानेश्वर मीनभवनस्थित पानोस रेष्टोले ‘स्ट्याण्ड–अप कमेडी शो’ को आयोजना गर्ने भएको छ । रेष्टोले आगामी अप्रिल ७ तारिखका दिन उक्त शो को आयोजना गर्ने तयारी गरेको हो । विगत केही वर्षयता राजधानी काठमाडौंका नगरबासीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परिकारका स्वाद पस्किदै आएको यस रेष्टो ‘फाइन डाइन – फेमिली रेष्टुरेण्ट’ कारुपमा परिचित छ । रेष्टोले यस पटक आफ्ना ग्राहकहरुलाई नयाँ स्वाद दिने..
गर्मी क्षेत्रमा पिउने लस्सी(मही) को काठमाडौँमा पनि व्यापार बढ्दै
काठमाडौँ, १३ चैत । ‘आहा ! कस्तो मिठो लस्सी !!’:- इन्द्रचोकमा लस्सी पसलमा एक गिलास चिसो लस्सी पिउँदै गुरुप्रसाद भण्डारीले भने । काठमाडौँमा गर्मी बढेसँगै चिसो पिउने मानिसको संख्या पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ । गर्मी बढेसँगै दहीमा पानी र चिनी मिसाएर लस्सी (मही) बनाउने पसलमा उपभोक्ताको भीड बढ्न थालेको छ । प्रतिगिलासको रु ४० देखि रु ८० पर्ने यस्तो लस्सी पसल काठमाडौँका चोकचोकमा..
गर्मीमा कांक्रा खानुको फाइदाहरु: स्वस्थ्य र सौन्दर्यका लागि कति उपयोगी ?
९ चैत, काठमाडौं । संसारमा धेरै खेती हुने तरकारीमध्ये चौथो नम्बरमा पर्ने काँक्रो स्वास्थ्यको दृष्टिले अत्यन्तै लाभदायक मानिन्छ । काँक्रो पहिलो पटक अमेरिकामा उमारिएको थियो । अमेरिकनहरुले बर्गरमा सबैभन्दा बढी कांक्राको प्रयोग गर्ने गर्छन् । सरल र सहजै रुपमा पाइन सकिने बहुगुण भएको फलफुल मध्येको एक फल काँक्रोको कयौं फाइदा छन् । सागसब्जीमध्ये कांक्राको खेती धेरै स्थानमा हुन्छ । स्वास्थ्यका आधारमा..
भुटेको मकै खानुको फाइदाहरू के के हुन् ? जानी राखौं
काठमाडौँ, २५ फागुन भुटेको मकैलाई नेपाली गाउँ-घरमा निकै प्रचलित खाजाको रुपमा लिईन्छ । गाउँघरतिर सजिलो र सहज नास्ता भुटेको मकै नै हो । अहिले शहरमा पनि भुटेको मकैले एक छुट्टै स्थान बनाएको छ । फिल्म हल वा रेष्टुराँमा खाइने पपकर्न पनि एक प्रकारको भुटेको मकै नै हो । तर, गाउँघरको रैथाने मकै र फिल्म हलमा खाइने पपकर्न केहि भिन्नता भने अवस्य..
यसरी बनाउन सकिन्छ स्वादिलो तरकारी, जानी राखौं !
काठमाडौं। तपाई हामी सबै अधिकांशलाई तरकारी बनाउन त आउछ नै तर स्वादिलो तरकारी बनाउन भने कमैलाई आउछ । स्वाष्दिट तथा स्वादिलो तरकारी सबैलाई मन पर्ने भए पनि तरकारी स्वाष्दिट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा भने कमैले ध्यान दिएका हुन्छन् । पकाए पछि मीठो भइहाल्छ भनेर कतिपयले अल्छी गरी खाना पकाउने गर्छन् । जसले गर्दा समय त खेर जाने नै भयो भने पकाएको खाना..
‘पानीपुरी’लाई आखिर किन यति धेरै मन पराउछन् नेपाली युवतीहरु ?
‘पानीपुरी’ नेपाल र भारतमा निकै रुचाईन्छ । खासगरी युवतीहरु ‘पानीपुरी’ भन्ने बितिकै मरिहत्ते गर्दछन् । नेपालमा प्रायजसो युवतीहरुले धेरै रुचाउने गरेको खानेकुरा मध्धे नै पर्ने गर्छ ‘पानीपुरी’। यो भारतमा पनि निक्‍कै लोकप्रिय छ । भारतमा यसलाई विभिन्न नामले चिन्ने गरिन्छ । विशेषगरी नेपाल र भारतमा पानीपुरीको व्यवसाय निकै फस्टाउदो समेत छ । यसको स्वाद चाख्‍न युवतीहरुको लाइन नै लाग्‍ने गरेको..
'भ्यालेन्टाइन डे' का अवसरमा ‘सौराहा खाना महोत्सव’ हुँदै, पर्यटकलाई १५ प्रतिशत छुट
रत्ननगर, चितवन, ११ माघ : प्रणय दिवसका अवसर पारेर यही माघ २८ गतेदेखि चितवनको रत्ननगरस्थित सौराहामा १२औँ सौराहा खाना महोत्सव (फुड फेस्टिबल) हुने भएको छ । रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन नेपाल (क्षेत्रीय रेवान) र रेवान महिला समूहको आयोजना तथा क्षेत्रीय होटल संघ, युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी, सौराहा पर्यटन व्यवसायी समूह र साना पर्यटन व्यवसायी समूहको सहआयोजनामा सो महोत्सव हुन लागेको बिहीबार..
आलु र केराउको अचार बनाउने तरिका, जानी राखौं !
काठमाडौं । नेपाली खानामा बिशेष रुचीका साथ खाइने परिकार हो, आलु र केराउको अचार । प्राय अचार सबैलाई मन पर्न सक्छ । आलु र केराउको अचार पनि निकै नै स्वादिष्ट हुने गर्छ । प्राय सबैलाई मन पर्ने आलु र केराउको अचार मन परे पनि कसरी बनाउने भन्ने बारे कुरमा तपाई अनभिग्य हुनुहुन्छ भने हामी आलु र केराउको अचार बनाउने तरिका बारे जानकारी..
काठमाण्डौ,पौष २८ । जातीय विविधताको उत्कृष्ट संग्रहालय समेत भनिने हाम्रो मुलुक नेपालमा जातैपिच्छे फरक संस्कृति र चाड रहेको पईन्छ। ति धेरै चाडहरु मध्ये सांस्कृतिक एकताको चाड हो - माघे सक्रान्ति । माघे सक्रान्ति प्रत्येक जसो जात र समुदायका नेपालीहरुले आ-आफ्नै किसिमले मनाउदै आएको पाइन्छ। तर जसले जसरी मनाए पनि सबैको परिकारमा स्थान ओगट्न सफल परिकार हो- तिलको लड्डू । तिल र सख्खरलाई मिलाएर बनाएको ..
काठमाडौं । माछाको परिकार तपाई हामी प्राय सबैलाई मन पर्न सक्छ । खसी, कुखुरा लगायतको मासु मन नपर्नेहरुका लागि माछा अत्यन्तै मन पर्न सक्छ । त्यस्ता मानिसहरुका लागि फ्राइड फिस विथ स्पिनाच एक स्वादिष्ट परिकार बन्न सक्छ । उनीहरुले माछाका बिभिन्न परिकार बनाएर स्वाद लिन सक्छन् । फ्राइड फिस विथ स्पिनाच बनाउन सर्वप्रथम यी सामाग्रीहरुको आवश्यकता पर्दछ । आवश्यक सामग्री २ सय ५० ग्राम..
काठमाडौं पौष १४ । अचार भन्ने वित्तिकै तपाई हामी सबैको मुख रसाएर पानी आउछ । अचार विभिन्न खानेकुराका बनाउन सक्छौं । जस्तो कि टमाटरको अचार, आँपको अचार, मुलाको अचार, खुर्सानीको अचार, गुन्द्रुकको अचार लगायतका अचार बनाउन सकिन्छ । हामी यहाँ गुन्द्रुकको अचार बनाउने सजिलो तरिकाबारे जानकारी दिदै छौ । गुन्द्रुकको अचार तपाई हामी सबै आम मानिसलाई मन पर्ने गर्छ । यो अचार..
स्वादिष्ट ‘एग पकौडा’ बनाउने तरिका, यसरी जान्नुहोस् !
काठमाडौं । तपाई हामी अधिकांशलाई अण्डा मन पर्न सक्छ । अण्डा स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा हो र यसले मानिसको शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पूराउँछ भन्ने तपाई हामी सबैलाई थाहा छ । विभिन्न खाले पोषक तत्वले भरिपूर्ण हुनुका साथै क्याल्सियम, आइरन तथा प्रोटिनजस्ता तत्वको भण्डारको रुपमा रहेको अण्डाको सेवनले शरीरलाई चाहिने दैनिक पौष्टिक तत्वको भरणपोषण गर्न सहयोग पूराउँछ । अण्डामा भिटामिन ए, फोलेट, भिटामिन बी टू,..
अमेरिका जाने सपनाले जुराएको 'मानबहादुर' को कफी यात्रा..
आईतवार, मंसिर २४, २०७४ साल
मंसिर २४, काठमाडौँ । “कफी मेरो रगतमै बग्न थालिसक्यो ।”जीवनका २ दशक कफीको तितो झोलमा मिठास भर्न बिताईसकेका मानबहादुर श्रेष्ठ यस्तै भन्छन् । अझै पनि उनि कफीको तितो झोलमा मिठास भर्नमै व्यस्त रहन्छन् । बानेश्वर थापागाउँमा रहेको उनको कफी शपमा पुग्दा उनि कहिले कफी बनाईरहेका कहिले भुई पुछिरहेका त कहिले एस्प्रेसोको चुस्कि लगाईरहेका भेटिन्छन् । कहिले बिहानै कफी शपमा जाने मौका जुर्‍यो..
काठमाडौं । अधिकांश मानिसको रोजाइमा पर्ने मासुको नाम हो कुखुराको मासु । कुखुराको मासु धेरै मानिसले प्राय दिनहुँ जसो खाने गर्दछन् । तर कति पय मानिसलाई भने कुखुराको मासु मन नपर्न पनि सक्छ । प्राय बजारमा खसीको मासु, बुंगुरको मासु, बदेलको मासु, राँगोको मासु, अस्ट्रिजको मासुको तुलनामा कुखुराको मासु अलि सस्तो पर्ने भएकाले पनि मानिसहरुले कुखुराको मासु नै धेरै सेवन गर्ने गर्दछन्..
काठमाडौं । गाजरको हलुवालाई स्वादिष्ट परिकारको रुपमा लिने गरिन्छ । गाजरको हलुवा स्वादिलो हुनुका साथै पोषिलो पनि हुन्छ । गाजर सलादको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । शेष गरेर तपाईले गाजरको हलुवा जाडो याममा बनाएर खान सक्नु हुन्छ । यो परिकार बनाउने विधि यस प्रकार छ । आवश्यक सामाग्री – गाँजर १ किलो, दुध ३ पाउन, चिनी आधा किलो, बदाम आधा कप(टुक्रा गरेर काटेको), अलाईची..
काठमाडौं कार्तिक । पनिर एक दुग्ध उत्पादन हो । पनिर स्वादिष्ट परिकारको रुपमा परिचित छ । त्यसैले घरमा सामान्य कार्यक्रममा पनि मानिसहरु पनिरको परिकार बनाउँन चाहान्छन् । स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक र स्वादका लागि पनि पनिरलाई उत्कृष्ट मान्ने गरिन्छ । पनीरका विभिन्न परिकार : पनिरको भुजुरी आवश्यक सामग्री : पनिर २ सय ग्राम,प्याज १ वटा, अदुवा र लसुनको पेस्ट १ चम्चा, नुन–खुर्सानीको धूलो आवश्यकता अनुसार, बेसार आवश्यकता..
कार्तिक २४, काठमाडौं । युरोपमा कफी घरको बारेमा एउटा प्रचलित उखान छ – ‘हरेक क्रान्तिको जन्म कफी घरमा हुन्छ ।’ युरोपियन वा पश्चिमा देशमा कफीलाई पेय पदार्थ मात्रै नभई विचारसँग समेत जोडेर हेर्ने गरिन्छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा कफी घरबाट क्रान्तिको जन्म होला—नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, फस्टाउँदै गरेको कफी व्यवसायले नेपालमा पनि युवा पुस्ताका लागि व्यवसाय र..
तपाई मकैको तरकारी खानुहुन्छ ? यसरी बनाउनुस मकैको तरकारी !
काठमाडौं कार्तिक २० । आलु, बन्दा, काउली, साग, मुला लगायत अन्य गेडागुडिको तरकारी त तपाइ हामीले बनाएर खाने गर्दछौ । तर हामी तपाई कमै मात्राले मकैको तरकारी खाएका हुन्छौ । मकैको तरकारी भन्दा तपाईलाई अचम्म पनि लाग्न सक्छ । तर मकैको तरकारी अत्यन्तै स्वादिष्ट हुन्छ । सधै भरी एउटै खाले तरकारी खाँदा खादाँ वाक्क हुनु भयो भने मकैको तरकारी यसरी बनाउनु होस्..
काठमाडौं कार्तिक । च्याउ विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । च्याउ मात्ने र नमात्ने हुन्छ । नमात्ने च्याउ चाहिँ तरकारीको रुपमा सेवन गर्न हुन्छ । अहिले च्याउको खेती नै गर्ने गरिन्छ । यसको माग पनि ज्यादा नै हुने गर्छ । च्याउ जति स्वादिलो हुन्छ यो स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तिकै फाइदाजनक मानिन्छ । च्याउको सेवनले सरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई सन्तुलित गर्ने देखि लिएर स्तन क्यान्सर तथा..
Results 125: You are at page4of 5